Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo dib ugu laabtay Cadaado | Baydhabo Online
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo dib ugu laabtay Cadaado
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhow dib ugu laabtay magaalada Cadaado, iyadoo la filayo inay kula kulmaan waxgaradka iyo odayaasha deegaanka.
Sida ay sheegayaan wararka Madaxweyne Farmaajo ayaa kala hadli doona waxgaradka iyo odayaasha deegaanka xalinta tabashada ay ka qabaan heshiiskii Ahlsunna iyo Galmudug.
Odayaasha iyo waxgaradka Beesha Cadaado ayaa wata shuruudo adag, sida in Cadaado la cadeeyo maqaamkeeda, maadaama ay meesha ka baxeyso inay sii ahaato xarunta KMG, iyadoo loo guuray caasimadii Maamulka ee Dhuusamareeb.
Sidoo kale Odayaasha deegaanka ayaa tabasho ka qaba habka awood qeybsiga ee maamulka Galmudug iyo dowladda Dhexe oo beesha aanay wax xil muhiim ah ku laheyn, sidoo kale ay weysay in Cadaado sii ahaato xarunta maamulka oo markii hore KMG aheyd.
Wararka qaar ayaa sheegaya in laga yaabo in Cadaado noqoto xarunta Baarlamaanka oo ay ku sii shaqeeyaan Guddoonka Baarlamaanka iyo Xildhibaanada, isla markaana la dhagax dhigo xarunta Baarlamaanka uu yeelan doono.
Lama oga sida labada dhinac ay meel dhexe isugu imaan doonaan, hase ahaatee waxaa socota dadaalo badan oo lagu xalinayo tabashada ay qabto Beesha Cadaado.
Dhinaca kale Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu Cadaado uga sii gudbo degmada Hobyo, halkaasoo uu ku soo afjari doono socdaalkiisa qaatay mudada labada todobaad ka badan.